Amplifier Manufacturers & Suppliers - China zesikhulisa sefektri
Isikhulumi Mid Mid Range
Isipikha Se-Line Array
USomlomo weTheatre Yasekhaya
Isikhulisi Seshashalazi Lasekhaya
I-CT-6407 / CT-8407
Iprosesa ye-Digital KTV
Ukuphathwa kwamandla we-Smart
Ihhovisi kanye neWarehouse
12-intshi uhla eligcwele professi ...
Ububanzi obugcwele obuyi-intshi engu-12 intshi ...
Ububanzi obugcwele obungamasentimitha angu-15 ...
LA UCHUNGECHUNGE 800W pro audio amandla msindo 2 iziteshi 2U amplifier
I-amplifier yamandla ochungechunge ye-LA inamamodeli amane, abasebenzisi bangashintsha kalula ngokuya ngezidingo zomthwalo wesipikha, ubukhulu bendawo yokuqinisa umsindo, nezimo ze-acoustic zendawo.
Uchungechunge lwe-LA lunganikeza amandla wokukhulisa ahamba phambili futhi asebenzayo kuzikhulumi ezidume kakhulu.
Amandla wokukhipha wesiteshi ngasinye se-amplifier ye-LA-300 ngu-300W / 8 ohm, LA-400 ngu-400W / 8 ohm, LA-600 ngu-600W / 8 ohm, kanti i-LA-800 ingu-800W / 8 ohm.
CA UCHUNGECHUNGE 800W 2 iziteshi pro umsindo msindo
Uchungechunge lwe-CA iqoqo lama-amplifiers asebenza ngamandla enzelwe ngqo amasistimu anezidingo zomsindo ophakeme ngokweqile. Isebenzisa uhlobo lwe-adaptha kagesi yohlobo lwe-CA, enciphisa kakhulu ukusetshenziswa kwe-AC yamanje futhi ithuthukise ukusebenza kahle kohlelo lokupholisa. Ukusinikeza ngokukhipha okuzinzile nokwandisa ukuthembeka kokusebenza kwemishini, i-CA chungechunge inezinhlobo zemikhiqizo emi-4, engakunika amandla okukhipha kusuka ku-300W kuye ku-800W ngesiteshi ngasinye, okuwuhlobo olubanzi kakhulu lokukhetha. Ngasikhathi sinye, uchungechunge lwe-CA luhlinzeka ngohlelo oluphelele lobuchwepheshe, oluthuthukisa ukusebenza nokuhamba kwemishini.
AX UCHUNGECHUNGE 800W enamandla stereo amplifier professional
I-AX series amplifier power, ngamandla nobuchwepheshe obuyingqayizivele, obunganikeza ukusebenza kwekhanda lasekhanda elikhulu kunawo wonke futhi okuyiqiniso kakhulu namandla okushayela anemvamisa ephansi yohlelo lwesipika ngaphansi kwezimo ezifanayo neminye imikhiqizo; izinga lamandla lifana nezipika ezisetshenziswa kakhulu ezimbonini zokuzijabulisa nokusebenza.
I-E SERIES Class D amplifier yamandla esikhulumi esikhokhelwayo
ILingjie Pro Audio isanda kwethula i-E-series professional power amplifier, okuyiyona ndlela engabizi kakhulu yokungena ezingeni lokufaka izicelo zokuqinisa umsindo ezincane neziphakathi nendawo, ezinama-transformer wekhwalithi ephezulu. kulula ukuqhutshwa, kuzinzile ukusebenza, kubiza kakhulu, futhi kusetshenziswe kabanzi, Inesici somsindo esikhulu kakhulu esinikeza impendulo ebanzi kakhulu kumlaleli. I-amplifier ye-E yakhelwe ngqo amakamelo we-karaoke, ukuqiniswa kwenkulumo, ukusebenza okuncane naphakathi nendawo, izinkulumo zamakamelo enkomfa nezinye izikhathi.
E-48 1100W pro audio power amplifier match high amplifier match for dual 15-inch speaker
Ama-amplifiers kagesi we-E wakamuva we-E asebenza kalula, azinzile emsebenzini, ayabizi futhi asebenza ngezindlela eziningi. Zenzelwe ukusetshenziswa kumagumbi we-karaoke, ukukhulisa ulimi, ukusebenza okuncane naphakathi nendawo, izinkulumo zamakamelo enkomfa nezinye izikhathi.
I-FP UCHUNGECHUNGE 1350W 4 amashaneli pro audio amplifier high power amplifier for performance
Uchungechunge lwe-FP lisebenza ngamandla wokushintsha amandla wokukhulisa amandla ngesakhiwo esihlanganisiwe nesizwakalayo.
Isiteshi ngasinye sine-voltage ephakeme yokuzimela eguquguqukayo, ukuze i-amplifier ikwazi kalula sebenza nge izikhulumi zamazinga ahlukene wamandla.
Isifunda sokuvikela esikhaliphile sinikeza ubuchwepheshe obuthuthukisiwe ukuvikela amasekethe angaphakathi nemithwalo exhunyiwe, engavikela ama-amplifiers nezipika ngaphansi kwezimo ezimbi kakhulu.
Ilungele imidlalo emikhulu, izindawo zokudla, amakilabhu wokuzijabulisa aphezulu kanye nezinye izindawo.
I-EVC-100 350W i-karaoke amplifier mixer amplifier ne-bluebooth
Okukhipha okuyinhloko ngamandla aphezulu we-350W x 2.
Amasokhethi amabili wokufaka wemakrofoni, atholakala kuphaneli engaphambili, kumakrofoni angaphandle angenantambo noma imibhobho enentambo.
Sekela i-fiber yomsindo, okokufaka kwe-HDMI, okungabona ukudluliswa okungalahleki komsindo wedijithali futhi kuqede ukuphazamiseka komhlaba kusuka emithonjeni yomsindo.
I-FU450 450W ezine kwisikhulisi esisodwa se-karaoke amplifier multifunction mixer amplifier enombhobho ongenantambo
Uchungechunge lwe-FU oluhlakaniphile olune-in-one amandla amplifier: 450Wx450W
Isethi yesine-in-one yohlelo lwe-VOD (ifaniswe nesistimu ye-EVIDEO Multi-Sing VOD) + pre-amplifier + microphone engenantambo + i-power amplifier kusingisi esisodwa sokuzijabulisa somsindo nokubukwayo
I-LIVE-2.18B 1800W pro audio power amplifier high power amplifier yokusebenza
I-LIVE-2.18B ifakwe amajack amabili wokufaka kanye namajack okukhipha i-Speakon, ikwazi ukuzivumelanisa nokusetshenziswa okuhlukahlukene nezidingo zezinhlelo ezahlukahlukene zokufaka.
Kukhona inkinobho yokulawula ukushisa ku-transformer yedivayisi. Uma kunesimo sokugcwala ngokweqile, isiguquli sizoshisa. Lapho izinga lokushisa lifinyelela kuma-degree angu-110, i-thermostat izovala ngokuzenzakalela ukulawula ukushisa futhi idlale indima enhle yokuvikela.
I-FU-2350 350W amplifier yasekhaya ye-karaoke amplifier yokuthengisa eshisayo yokuxuba i-amplifier
Input uzwela / wokufaka impedance: 9MV / 10K
Amabhendi ayi-7 i-PEQ: (57Hz / 134Hz / 400Hz / 1KHz / 2.5KHz / 6.3KHz / 10KHz) ± 10dB
Impendulo ejwayelekile: 1KHz / 0dB: 20Hz / -1dB; 22KHz / -1dB
Amandla alinganisiwe: 350Wx2, 8Ω, 2U
Input uzwela / wokufaka impedance: 220MV / 10K
Amabhendi ayi-7 i-PEQ: (57Hz / 134Hz / 400Hz / 1KHz / 2.5KHz / 6.3KHz / 16KHz) ± 10dB
Uchungechunge lokushintshashintsha kweDijithali: ± 5 uchungechunge
I-THD: ≦ 0.05%
Impendulo yemvamisa: 20Hz-22KHz / -1dB
Impendulo yemvamisa ye-ULF: 20Hz-22KHz / -1dB
Ubukhulu: 485mm × 390mm × 90mm
I-CT-6407 / CT-8407 5.1 / 7.1 iziteshi eziyisishiyagalombili zesikhulisa-theatre sasekhaya isistimu yomsindo wasekhaya
Isikhulisi samandla esikhethekile se-CT chungechunge yinguqulo yakamuva ye-TRS audio professional amplifier power with a single switch. Idizayini yokubukeka, umoya olula, imisindo nobuhle buhlangana. Qiniseka ukuthi iphimbo eliphakathi nelithambile neliphansi, ukulawula imvamisa ephansi okunamandla, izwi langempela kanye nemvelo, izwi lomuntu elihle nelicebile, futhi umbala wethoni jikelele ulinganiselwe kakhulu. Ukusebenza okulula nokulula, umsebenzi ozinzile futhi ophephile, ukusebenza kwezindleko eziphezulu. Idizayini enengqondo futhi enhle, evumelana nokuhlomisa nge-subwoofer enamandla amakhulu, hhayi nje kuphela ukuthi ungayenza kalula futhi ngenjabulo i-karaoke, kepha futhi ingakuvumela uzwe umphumela we-acoustic wezinga lobuchwepheshe beshashalazi. Hlangana nokushintshwa okungenamthungo phakathi kwe-karaoke nokubukwa kwama-movie, yenza umculo nama-movie abe nokuhlangenwe nakho okungavamile, okwanele ukuzamazamisa umzimba wakho, ingqondo nomphefumulo wakho.
Ikheli: 7F, Litai Bldg, Luenfung Industrial Zone, Lishui Idolobha, Nanhai esifundeni, Foshan, Guangdong, China
Umakhala ekhukhwini: +8618902812553